Ireland oo sheegtay inay qaabileyso Qaxooti horleh | Gaaloos.com
Home » News » Ireland oo sheegtay inay qaabileyso Qaxooti horleh
Ireland oo sheegtay inay qaabileyso Qaxooti horleh
Dowlada Ireland oo xubin ka ah Midowga Yurub ayaa sheegtay inay qaabili doonto kumanaan qoysaska qaxootiga ee soo galay dalalka Talyaaniga iyo Giriiga.
Xukuumada Ireland ayaa sanadkii hore balan qaaday inay qaabili doonto qaxooti gaaraya 160.000 kuwaasi oo laga soo qaadayo dalalka Talyaaniga iyo Giriiga si culeyska looga qaado wadamadaasi ee ku yaal xaduuda Midowga Yurub la wadaago dalalka kale. Dowlada Ireland ayaa Salaasadii shalay shaacisay inay qaxooti dheeraad ah qaabili doonto.
Wadamada Midowga Yurub ayaa sanadkan doonaya inay dad gaaraya 120.000 qaxootiga ku sugan Giriiga iyo Talyaaniga la geeyo wadamada kale ee Yurub, balse dalka Ireland ayaa kamid ah wadamada faro ku tiriska ah ee sheegay inay diyaar u yihiin inay qaabilaan qaxooti dheeraad ah, halka dalalka kale ee bariga Yurub ay diidan yihiin in dusha laga soo saaro qaxooti horleh, halka kuwo kale ee Galbeedkana ay adkeeyeen xaduudahooda.
Dowlada Germany ayaa sanadkii hore noqotay wadankii qaabilay qaxootigii ugu badnaa ee Yurub soo galay kuwaasi oo ka badnaa 1 milyan, balse waxaan weli lagu guuleysan heshiis rasmi ah oo dhexmara wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub oo horey loogu baaqay inay si siman u qeybsadaan tirada qaxootiga soo galay dalalka Giriiga iyo Talyaaniga, wadamadaasi oo codsaday in lala qeybsado culeyska saaran.
Title: Ireland oo sheegtay inay qaabileyso Qaxooti horleh